मधुमेहबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस
सोमबार २३ मंसिर, २०७६ (Monday,9December, 2019)
असार १८, २०७६, बुधबार
काठमाडौं । अस्वस्थ जीवनशैली, व्यायामको कमी, धुम्रपान, मोटोपन, वंशाणु लगायतका कारणले मधुमेह हुने गर्दछ । मधुमेह भएका बिरामीले व्यायाम र खानपिनमा ध्यान दिने हो भने धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ ।
मधुमेह भएका बिरामीले योगा गर्ने हो भने पनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । मधुमेहबाट जोगिने ६ योगासन यसप्रकार छन् । यी योगासनलाई दैनिक रुपमा गर्ने हो भने धेरै मानिसहरु मधुमेहबाट बच्न सक्छन् ।
१. सशांक आसन
आफ्नो अनुकुलता अनुसार यो आसनमा तीन मिनेटसम्म बस्नु पर्दछ । दैनिक यो आसनलाई ३ देखी ५ पटकसम्म गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ । यो आसनमा बस्दा शुरुमा घुँडा टेकेर बज्रासनमा बस्दै दुवैहातलाई माथि राख्ने । हात माथि लग्दा लामो सास लिने । त्यसपछि विस्तारै हातलाई तल लैजाने । हात तल गरेर जमिनतिर झुक्दा सास विस्तारै छाड्दै झुक्ने । केही बेर रोकिँदै पुन माथि उठ्ने । यो आसनलाई तीन देखी ५ पटकसम्म गर्न सकिन्छ ।
सावधानः ढाड तथा कम्मरको हड्डीमा समस्या भएका, चक्कर आउने र उच्च रक्तचापका बिरामीले यो आसन गर्नु हुँदैन ।
२. योग मुद्रा आसन
सुरुमा पद्यमासनमा बस्ने । त्यसपछि हातलाई विस्तारै पछाडी ढाडमा लगेर राख्ने । विस्तारै तलतिर झुक्दै जाने । निधारले जमिनमा छुने प्रयास गर्ने । माथितिर जाने बेलामा लामो सास लिने र तल झुक्ने क्रममा विस्तारै सास छोड्दै जानु पर्छ । चित्रमा देखाएको जस्तै आसनमा २ मिनेटसम्म बस्ने । यो असानलाई आफ्नो अनुकुलता अनुसार दोहोराएर गर्न सकिन्छ ।
सावधानः मुटु, आँखा र ढाडको समस्या भएका बिरामी तथा गर्भवती महिलाले यो आसन गर्नु हुँदैन ।
खुट्टा र हातलाई चित्रमा देखाएजस्तै गरि राख्ने । यो आसनमा करिब दुई मिनेटसम्म बस्न सकिन्छ । यो पनि आफ्नो अनुकुलता अनुसार ३ देखी ५ पटकसम्म दोहोर्याएर गर्न सकिन्छ ।
सावधानः गर्भवती, पेप्टिक अल्सर, हर्निया र हाइपो थाइराइडको समस्या भएकाले यो आसन गर्नु हुँदैन ।
४. पश्चिमोत्तन आसन
खुट्टालाई सिधा पारेर राख्ने । हातले खुट्टाको औँला समाउने र विस्तारै टाउकोले घुँडा छुने । केही सेकेन्ड घुँडामा टाउकोले छोएपछि पुन टाउकोलाई विस्तारै माथितिर लैजाने । टाउको माथि लैजाने क्रममा सासलाई तान्दै लैजाने र तल ल्याउने क्रममा सास छाड्दै जानुपर्छ । यो आसनलाई पाँच पटकसम्म दोहोर्याउन सकिन्छ ।
सावधानः ढाडको समस्या भएका र गर्भवतीले यो आसन गर्नु हुँदैन ।
५. भुजंग आसन
भुइँमा घोप्टो परेर सुत्ने र विस्तारै टाउकोलाई चित्रमा देखाएझैँ उठाउँदै माथितिर लैजाने । चित्रमा देखाएकै पोजमा बढीभन्दा बढी समय बस्ने प्रयास गर्ने ।
सावधानः पेप्टिक अल्सर, हर्निया र हाइपो थाइराडको समस्या भएकाले यो आसन गर्नु हुँदैन ।
भुइँमा घोप्टो परेर सुत्ने । दुबै खुट्टा लाई जोड्नु होस। अब हात मुट्ठी कसेर तिघ्रा मुनि लागेर राख्नुहोस्। विस्तारै खुट्टालाई चित्रमा देखाएझैँ उठाउँदै माथितिर लैजाने । अब जतीबेर सम्म सक्नु हुन्छ आसान लाई रोकेर राख्नुस। तीन पटकसम्म यो आसनलाई दोहोर्याउने ।
सावधानः मुटुका बिरामी, उच्च रक्तचाप र इपिलेप्सिका बिरामीले यो आसन गर्नु हुदैन ।
(एजेन्सीको सहयोगमा ईहुलाकी डेस्क)
नेपाली बालबालिकामा परीक्षण गरिएको भ्याक्सीन 'सफल' तर के त्यो क्रममा नेपालको सबै विधिविधान पालना गरिएका थिए?
विराटनगरको नोबल अस्पताल तनावग्रस्त
पौडीमा गौरिकाकाे हयाट्रिक स्वर्ण,रचिन नयाँ इतिहास
१३ औं साग : महिला क्रिकेटको स्वर्ण बंगलादेशलाई
‘भ्रमण वर्ष–२०२०’ लक्षित गर्दै बुद्धमूर्ति निर्माण
क्याम्पभित्रै सुरक्षाकर्मीबीच एकआपसमा फायरिङ्, ६ जवानको मृत्यु